China Pulp Mill သန့်စင်စက်သည်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Xingtejia
1. Cast လုပ်ငန်းစဉ်: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံသွန်းသို့မဟုတ် shell ကိုမှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း။
2. စက်: သင်၏ပုံဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာအဖြစ်။
Parason Latest Technology Refiner Plates ဖြင့်သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုဆက်လက်လျှော့ချပါ။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ ယူနီဖောင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အရည်အသွေးမြင့်ပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
XTJ Finedge Curved Bar သန့်စင်ဆေးရည်များသည်အထူးပြုလုပ်ထားသောသွန်းလောင်းသည့်စက်ရုံဖြစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်တူညီသောမာကျောမှုကိုပေးသည်။ သံမဏိပြားများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတူညီစွာဝတ်ဆင်ပြီးဘားအရှည်ရှည်ရမည်။ ပျော့ဖတ်စီးဆင်းမှုသည်ဘားများအကြားရှိကွင်းဆက်များအတိုင်း လိုက်၍ နေထိုင်မှုအချိန်ကြာရှည်သည်။
Finedge Curved Bars ၏ရလဒ်သည်ကြာရှည်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသန့်စင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ INLET ရှိသန့်စင်သောဘားများကိုကွေးညွှတ်ခြင်းကသူတို့ကိုစုပ်စက်တစ်ခုအဖြစ်ကောင်းစွာလည်ပတ်စေသည်။ ကဏ္sectorsများအကြားရှိရေကာတာတစ်ဝက်သည်ပိုမိုသန့်စင်ပြီးပိုမိုပျော့ပျောင်းသောပျော့ဖတ်နေသည့်အချိန်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ အဆိုပါ XTJ တိကျတဲ့အထူး Casting & CNC ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်တိကျသော groove width ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော low bar အားဖြင့်နိမ့်စွမ်းအားနိမ့်ကျသောအပလီကေးရှင်းများကိုကောင်းမွန်စေသည်။
•အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း Edge အရှည် (CEL) ။
• Finedge Curved Bar များသည် Pump တစ်ခုအဖြစ်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
• Hard Wood နှင့်သင့်လျော်သော - ပြန်လည်အသုံးပြု Fiber Special Metalurgy ။
• Finedge Curved bars များ - နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသန့်စင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်။
•အနိမ့်တိကျတဲ့ Edge Load (SEL) ။
•ကောင်းသော fibrillation တသမတ်တည်းဖိုင်ဘာကုသမှု။
• Hard Wood နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြု Fiber အတွက်သင့်တော်သည်။
XTJ Variable နံရိုးဒီဇိုင်းသန့်စင်စက်ကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်အထူး Casting & CNC နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် အဆိုပါသန့်စင်ဇုန်အတွက်တူညီနေမှု။ XTJ Variable နံရိုးဒီဇိုင်း သန့်စင်သောသံမဏိပြားများကိုအထူးသွန်းလောင်းသောနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်ရှည်လျားသောဖိုင်ဘာနှင့်တိုတောင်းသောဖိုင်ဘာနှင့်အတူသီးခြားစီသန့်စင်ရန်လိုအပ်သည် လိုအပ်သော SEL & CEL နှုန်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဘားပုံစံများ။
ရှည်လျားသောဖိုင်ဘာဇုန်များအတွက်အရံအလျင်သက်ဆိုင်ရာပရိဘောဂများအတွက်လိုအပ်သော HW ဇုန်ထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
ရှည်လျားသောဖိုင်ဘာဇုန်အတွက်နံရိုးအမြင့်သည်ပိုမိုတို။ တိုသည် လိုချင်သောသန့်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးရဖိုင်ဘာဇုန်။
ဒီဒီဇိုင်းကနိမ့်ဆုံးအတိုကောက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသေချာ ပိုမိုမြင့်မားသောကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်အတူစက္ကူအတွက်ပိုကောင်းအစွမ်းသတ္တိပေးသောဖိုင်ဘာ အရှည်။
ပိုကောင်းသော throughput အတွက် disc ထဲတွင် base taper ရှိပါသည်။ disc ကို၏ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းရည်၏ optimization ။ - SAS ဒီဇိုင်းကမ်းလှမ်းသည် သန့်စင်စက် disc ၏ထောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအနီးကပ်ထိန်းချုပ်သည်။
• Outlet ဒဏ်ငွေဘားပုံစံ
• Base Taper
•အဘယ်သူမျှမ Breaker ဘား
• SAS ဒီဇိုင်း
•ဇုန် ၂ ခုအကြားရှိလမ်းခွဲလိုင်း
•ပါဝါသိမ်းဆည်းခြင်း / T / oSR
ရှေ့သို့ Tube Shields